SWEDEN: Ciidamada Millateriga oo markii ugu horreeysey adeegsanaya farsamo ku cusub (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka SWEDEN: Ciidamada Millateriga oo markii ugu horreeysey adeegsanaya farsamo ku cusub (Dhegeyso)
SWEDEN: Ciidamada Millateriga oo markii ugu horreeysey adeegsanaya farsamo ku cusub (Dhegeyso)
(Hadalsame) 17 Nof 2021 – Ciidamada Xoogga Dalka Sweden ayaa ka baaraandegaya qorshe cusub oo ay ku eegayaan suurtagalnimada inay hawada u diraan dayax-gacmeedyo wax basaasa ama maareeya isgaarsiinta.
Waxaa arrintaa ka hadlaya Abaanduulka Ciidanka Sweden, Micael Bydén. “Waxaan horteeyda ka arki karaa dayax-gacmeedyo yar yar oo aanu adeegsan karno waqti gaaban annagoo u dirayna aag xaddidan iyo qorshe kooban, ayuu yiri.
Ciidanka Cirka Dalka Holland ayaa xagaagii cirka u diray dayax-gacmeedkii ugu horreeyey kaasoo la yiraahdo Brik 2, halka Sweden ay 2019-kii daraasad dhanka dayax-gacmeedyada ah la bilowday Maraykanka, balse weli ma dirin wax dayax-gacmeed ah.
Previous articleBARIGA DHEXE: Min dib-qalloocyo, daadad, dhir gubanaysa ilaa dhul-gariir & dhagxaan baraf ah oo cirka kasoo dhacaya (Daawo inta dal ee dhibku ku dhacay)
Next articleSAWIRRO: Muqdisho oo laga wado dhisme naqshaddiisa laga dheegtey dhiisha caanaha (Howl muhim ah oo lagu qaban doono)